Enif TV: Ihe I Kwesịrị Knowmara | RoidHub
Top Storelọ Ahịa Ahịa Efere
Ọ nwere mmasị
»Enif TV: Ihe niile ị chọrọ ịma
Enif TV: Ihe Need Chọrọ .mara
Ihe nkiri a dị ka ụdị ngosipụta nka bụ otu n’ime ihe ndị kacha ewu ewu na isi mmalite nke ntụrụndụ maka ndị na-ege ntị n'ụwa. Anyị na-ekwu okwu banyere Enif TV na ọ bụ ihe dabara adaba na ụdị ntụrụndụ a.
Ndị na-ege South South nwere ikike maka opera ncha na ọ bụ ya mere na mgbe fim ahụ gasịrị, ọ bụ ihe nkiri TV na serials bụ ndị mejupụtara ụdị ntụrụndụ kachasị.
Ọ bụ nke a mere ụlọ ọrụ na-eto eto nke ntụrụndụ ihuenyo dị ntakịrị n'ofe mpaghara ahụ ji agbapụta usoro isiokwu dị iche iche, ọdịnala na ndị ọzọ.
N'otu oge ahụ, n'oge a nke ijikọ ụwa ọnụ. A na-ekpughere anyị n'echiche ọdịnala nke mpaghara ndị ọzọ. N’ezie, mmadu nke oge a bu ngwakọta nke otutu omenala otutu ndi obodo na ewepu ya na ya.
Otu ụzọ ọdịbendị ọdịbendị a bụ inweta ọdịnaya ntụrụndụ site n'ofe ụwa. N'ụwa niile, enwere ebe dị ole na ole nke ngwaahịa ihe nkiri nwere ike ịdọta ndị na-ege ntị si n'akụkụ dị iche iche nke ụwa. Otu ihe atụ dị otú ahụ bụ Dramalọ Ọrụ Ihe Nkiri nke Turkish.
Gịnị bụ Enif TV
Ndị ọzọ na Enif TV
YouTube: TRT Ertugrul nke PTV
Urdu / Hind Dramas na gam akporo Mobile
Nke a bụ ọwa YouTube sitere na Dubai ma ọ na-ezube iwetara gị ọdịnaya kachasị mma sitere na ụlọ ọrụ dị iche iche gafee mbara ụwa. A malitere ọwa a iji mepụta ọdịnaya vidiyo dị ịtụnanya maka ndị na-ekiri Hindi na Urdu.
Nke a gụnyere ntụgharị nke ụdị nnukwu ọrụ sitere na mpaghara dị iche iche maka ndị na-asụ asụsụ Urdu na Hindi.
Nwere ike ịnweta ndị a n'oge ọ bụla na ebe ị na-akwụghị ụgwọ ndebanye aha na ọwa. Yabụ ọ bụrụ na ị na-achọ Urdu ma ọ bụ Hindi akpọrọ Kurulus Osman Episodes ma ọ bụ onye na-akwado Urdu / Hindi akpọrọ Ertugrul Ghazi. Nwere ike ilele ihe niile ahụ na usoro nke nhọrọ gị.
Ihe kachasị mma banyere YouTube bụ na ịnwere ike ịnweta ọdịnaya ahụ na ekwentị mkpanaka gị ma ọ bụ n'otu oge jikọọ na gam akporo TV gị ma lelee ya na ezinụlọ gị na ndị enyi gị nnukwu ihuenyo.
Ma ị na-emefu ngwụsị izu n'ụlọ ma ọ bụ na ị na-aga n'etiti ọrụ na ụlọ gị. Nwere ike jikọọ na ịntanetị wee malite ile ebe ị hapụrụ oge ikpeazụ.
Karịsịa, ọ bụrụ na ị na-eche ịmalite ịlele okirikiri Osman Ghazi Turkish. Nke a bụ ọwa ga-eso. Nwere ike ịnweta usoro ihe omume niile maka gị. Ejiri asụsụ ụda asụsụ Hindi na Urdu nwere ụda olu kwesịrị ekwesị, ịgaghị agbaghara ọkpụ ebe a.
Ọ bụrụ na ị na-eche maka ihe ndị ọzọ ga - eme ka ọwa nke a na Enif TV YouTube. Nọgide na-agụ. N'ebe a, anyị ga-enye gị nkọwa nke isi mmalite ndị ọzọ iji nụ ụtọ ihe ndị Turkish na ọdịnaya ndị ọzọ akpọrọ na Hindi na Urdu. You nwere ike iji ekwentị mkpanaaka gị, laptọọpụ, ma ọ bụ kọmpụta nke gị iji nwee ọ serụ ndị a na-adọrọ adọrọ.
Nke a bụ ngalaba ntụrụndụ nke Pakistan Television Network. A na-ekwupụta onye mgbasa ozi gọọmentị nke mba ahụ site na ịmalite oké ebili mmiri maka oge ndị a site na iwebata Diliris Ertugrul bidoro dị ka Ertugrul Ghazi.
Ọ na-ekwupụta ụdị Urdu akpọrọ nke ndị na-ekiri Hindi nwekwara ike ịnụ ụtọ na-enweghị ihe isi ike.
Ọ bụrụ na ịchọghị ikiri ihe onyonyo onyonyo maka ihe ọ bụla. Mgbe ahụ enwere nhọrọ ndị ọzọ ị ga-eme nyocha. Can nwere ike ịga YouTube: TRT Ertugul nke PTV.
Nke a bụ ọwa na-eme ihe ngosi maka Ertugrul ejije na ụdị akpọrọ. Can nwere ike ịmalite site na ihe omume ọ bụla ma kwụsịtụ ma hapụ oge ọ bụla ịlaghachi ọzọ.
Nhọrọ ndị ọzọ bụ maka ndị ọrụ ekwentị. Ọ bụrụ na ịnwere ekwentị gam akporo gam akporo, nke a bụ ụzọ kachasị mma maka Enif TV.
Mgbe ahụ ị nwere ike iwunye ọtụtụ ngwa nke ga-enye gị ohere ịbanye kpọmkwem na mpaghara akpọrọ Turkish kpọrọ n'asụsụ obodo. Ndị a gụnyere Abbasi TV Apk, iFilms Ngwa, na Makki TV.
You nwere ike inyocha ihe ndị ọzọ gbasara ngwa ndị a ma budata faịlụ APK na otu mgbata. Mgbe ahụ ị nwere ike ịnụ ụtọ ihe nkiri Turkey na ekwentị gam akporo n'ebe ọ bụla n'oge ọ bụla.
Enif TV bụ mgbakwunye ọhụrụ na ntanetị sitere na ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ ihe nkiri na ọdịnaya showbiz ndị ọzọ si n'akụkụ ụwa niile. N'ebe a, a na-akpọtara gị ihe nkiri ndị a n'asụsụ Hindi na Urdu. Ihe niile ịchọrọ bụ njikọ internetntanetị na ngwaọrụ iji nweta ọwa ahụ.
Kekọrịta Ugbu a
Pịa ka ịkekọrịta na Skype (Ga-abanye na windo ọhụrụ)
Osman Ghazi n’asụsụ Hindi
Osman Ghazi na Urdu
Turkish Dramas na gam akporo
Art & Kere (3)
Free Maapụ & Igodo APP (1)
Njem & Obodo (6)
Video Player & Editors (22)
Nri na Ṅụọ (2)
Egwuregwu efu efu (1)
Egwuregwu njem efu (1)
Hacking egwuregwu (23)
Ịrụ egwu (7)
Hacking ngwa (26)
si ebi ndụ (5)
Ọ nwere mmasị (5)
Akụkọ & Ụlọ Nche (4)
Ịzụ ahịa (4)
ịme anwansị (10)
APPUPUPUPU diri otu (1)
Copyright Copyright 2021 RoidHub - Storelọ Ahịa Rlọ elu agbagoro